बजेटमा तलब बढाउने तयारी ! - Aarthik Sanjal
बजेटमा तलब बढाउने तयारी !
आर्थिक सञ्जाल	काठमाडाैं	वैशाख २८, २०७९
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक २०७९/०८० वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी थालेको छ । आगामी जेठ १५ गते ल्याउने बजेटका लागि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले गत चैत १ गतेदेखि नै उद्यागी, व्यवसायीसँगै सरोकारवाला निकायसँग बजेटका लागि सुझाव संकलन थालेको थियो ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार बजेटका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ । मस्यौदा लेखन समितिले दिएको खर्च संरचनाअनुसार नै बजेट निर्माण भरिहेको अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाले बताएको छ ।
मस्यौदा लेखन समितिमा संयोजक भुपाल बरालसहित पाँच जना सदस्य रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले चैत २ गते उक्त समिति बनाएको थियो । विभिन्न संघ(संस्था, अर्थविद्, बिमा क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय , कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला लगायतको सुझावका आधारमा बजेट निर्माण भइरहेको जनाइएको छ ।
बजेट निर्माणमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख सहसचिव महेश आचार्य, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव ईश्वरी अर्याल र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम सुवेदी सक्रिय छन् । बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतले पनि सहयोग गर्नेछन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी कार्तिक(मंसीर महिनामा संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन समेत रहेकाले सरकारले यसपालि लोकप्रिय बजेटको तयारी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले यसपालीको बजेट मार्फत कर्मचारीको दुई हजारसम्म तलब बढ्ने तयारी गरेको छ ।
२८ वैशाख २०७९, बुधवार १०:३८ बजे प्रकाशित
नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ५ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा
पर्यटन बोर्डले पर्यटकको सुविधाका लागि सटल बससेवा सञ्चालन गर्ने